Quelle évacuation pour un sanibroyeur ? | Lyse Concept
Waa maxay dhexroorka iyo nooca isku xirka tuubada musqusha? Dhexroorka ugu caansan ee isku xirka qulqulka WC waa 10 cm. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara kala duwanaansho u dhexeeya 9 iyo 11 cm. Voir l’article : Comment installer des toilettes sans Evacuation ?. Isku xirka dhuumaha WC wuxuu noqon karaa lab ama dhedig.
Sidee loo rakibaa musqusha macarator?
Way ku filan tahay oo keliya in la dul dhigo tuubooyinka meesha dareeruhu ku wareego. Voir l’article : Comment ça marche un sanibroyeur ?. Waalka aan soo laaban waxa laga yaabaa in uu ku haboon yahay mareenada WC, mashiinka dharka lagu dhaqdo, saxanka qubeyska, weelka dhaqda, saxanka, tuubooyinka cumulus, bulaacada nadiifiyaha, iwm.
Aqoonso isku-xiryada oo habee bamka.
Ku xidh musqusha nadiifiyaha.
Ku xidh meesha laga soo saaro bamka biyaha wasakhda ah.
Ku xidh sanibrinder-ka korontada oo samee tijaabooyinka.
Ku xidh nadiifiyaha musqusha. Ka dib marka la xiro biyaha, tallaabada ugu horreysa ee rakibidda waa in lagu xiro bullaacadaha nadaafadda iyo meel kasta oo nadaafadeed. Si arrintan loo sameeyo, geli xiriiriyaha godka u dhigma ee qalabka, ka dibna ku dheji daboolka hareeraha caagga.
Alaabta ugu badan ee lagu taliyay in lagu nadiifiyo saabuunta waa khal cad. Waxay baabi’isaa jeermiska iyo kaydka. Isticmaal dhalada buufinta, ku faafi khalka gudaha musqusha.
Dayactirka aasaasiga ahi waxa uu ka kooban yahay nadiifinta haanta iyadoo la isticmaalayo mishiinka gaarka ah ee Sanibroyeur SFA oo lagu qasi jiray in yar oo biyo nadiif ah oo ku jira dhalada buufinta. Dhowr buufin ayaa ku filan. Si qoto dheer loo gooyo, mugga laba litir oo ah wakiilka SFA waa in lagu shubaa, iyada oo aan lagu milmin xagga hoose ee saxanka musqusha.
Ku shub qiyaas u dhigma galaas asiidh hydrochloric ah baaquli suuliga, ka dibna xidh. Ku dhaaf dhawr saacadood ama xataa habeen haddii ay suurtogal tahay, waase haddii qofna musqusha isticmaalo. Marka wakhtigu dhaafo, biyo raaci musqusha oo qalliinku wuu dhammaaday.
Warshada mindidu waxay u shaqeeyaan laba marxaladood: mindiyaha (waxaa jira laba ka mid ah) marka hore waxay yareeyaan alaabta, halka marawaxadaha hoos ku yaal ay bamgareeyaan alaabta si ay u daad gureeyaan. Farsamada kale – tan Watermatic – waxay ku shaqeysaa shabag bir ah.
Si aad u nadiifiso sanibrinder, isticmaal khal cad, tani waa xalka ugu fudud. Markaad nadiifinayso qalabka, xasuuso inaad furto. Ku shub khalka cad dhalada buufinta oo ku faafi alaabta gudaha musqusha.
Sidee loo nadiifiyaa sanibrinder-ka? Alaabta ugu badan ee lagu taliyay in lagu nadiifiyo saabuunta waa khal cad. Waxay baabi’isaa jeermiska iyo kaydka. Isticmaal dhalada buufinta, ku faafi khalka gudaha musqusha.
Way ku filan tahay oo keliya in la dul dhigo tuubooyinka meesha dareeruhu ku wareego. Waalka aan soo laaban waxa laga yaabaa in uu ku haboon yahay mareenada WC, mashiinka dharka lagu dhaqdo, saxanka qubeyska, weelka dhaqda, saxanka, tuubooyinka cumulus, bulaacada nadiifiyaha, iwm.
Musqusha macmacaanku ma nuugo: dhammaan meelaha laga galo aaladda waa inay ahaadaan cuf. Meesha laga baxo, tuubada daadgureynta Ø32mm ee PVC waa in ay ahaataa mid jiif ah, haddii ay jiirartana, waxa ay hoos ahaan kartaa oo kaliya, si looga fogaado khatarta biyaha fadhiidka ah.
Sidee buraashyadu u shaqeeyaan? Nadiifiyaha guud ahaan wuxuu u baahan yahay in lagu rakibo meel u dhow musqusha iyo meel koronto ah. Runtii, sanibroyeur, oo ku xidhan korantada, waxay si toos ah u bilaabataa biyo kasta oo biyo ah si ay u burburiso saxarada.
Comment détartrer un WC suspendu Geberit ?
Khalka cad ayaa lama huraan u ah in la dhimo musqushaada gidaarka laadlaadsan. Taas awgeed, waa lagama maarmaan in la faarujiyo taangiga. Ka bacdi, waa inaad kululaysaa khalka oo aad marisaa qaybta la dhalaalayo habeenkii.
Comment déboucher un sani broyeur ?
Naftaada ka saar burushka nadaafadda Kaliya waa inaad gelisaa koobka nuugista oo taabto afka dheecaanka ka baxaya oo riix oo jiid ilaa uu istaaguhu ka soo baxo. Moodooyinka leh bambooyin, waxaad kaliya ku dari doontaa tallaabada hawlgalka ee bamka ka hor intaadan jiidin koobka nuugista.
Haddii aad aragto in nadiifiyahaagu uu xiran yahay, waxaa jira dhowr xal oo aad diyaar u tahay si aad wax uga qabato dhibaatada. Talaabada ugu horeysa, sida ka hor nooc kasta oo faragelin ah oo lagu sameeyo sanibrinder, hadda waa in la gooyaa. Waxaad markaa isku dayi kartaa inaad ka furto rakibaadaada koob nuugid.
Waxaa lagugula talinayaa inaad doorato alaab waxtar leh, oo aan aad u xanaaqsanayn, sida alaabada dabiiciga ah ee loogu talagalay in lagu furo furayaasha nadaafadda. Waxaan sidoo kale qaadan karnaa alaabta dabiiciga ah sida kiristaalo soodhaha ama khal cad. Sida kale ee loo furo nadiifiyaha waa in la saaro oo la nadiifiyo.
Sida loo xidho nadiifiyaha? Ku xidh sanibrinder-ka korontada oo samee tijaabooyinka. Marka xabagta PVC ay engegto, ku xidh mishiinka korontada. Iyada oo ku xidhan qaabka loo qaabeeyey, ku xidh korantada ama sanduuqa isgoysyada.
Comment installer un sanibroyeur dans une salle de bain ?
Ku rakib musqusha macerator: 7da xeer ee la raacayo
Dooro qaabka saxda ah ee shredder. …
Hubi in dahaarka codka wanaagsan. …
Si sax ah u hagaaji tuubada bullaacadaha. …
Ma jiro jiirada kore ee tuubada dheecaanka mulcher WC. …
Haddii ay dhacdo in kor loo qaado, marka hore samee qaybta toosan ee qulqulka.
Comment installer un Sanicompact ?
Labada shuruudood oo keliya ayaa ah inaad haysato biyo-gelin iyo xidhiidh koronto. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku xirto sanibrinder-ka iyo dekedda qabowga biyaha, ka dib ku xir suxulka SANICOMPACT ee tuubada PVC oo ku xir albaabka weyn.
Mise ku xidhi nadiifiyaha? Nadiifinta waxaa lagu dhejin karaa meel kasta oo guriga ka mid ah, ilaa inta lagu dhejin karo meel koronto oo lagu xiro tuubooyinka. Runtii, waxay faa’iido u leedahay in lagu xidho tuubooyinka aadka u yaryar sida weelka weelka ama mashiinka dharka lagu dhaqdo tusaale ahaan.
Comment installer un sanibroyeur compact ?
Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad ku xirto sanibrinder-ka iyo dekedda qabowga biyaha, ka dib ku xir suxulka SANICOMPACT ee tuubada PVC oo ku xir albaabka weyn. Kadibna ku dheji isafgaradka 230 volt outlet oo waxaad isla markiiba heleysaa musqul cusub oo shaqeynaya.
Comment fonctionne un sanibroyeur compact ?
Maxaa loo mamnuucay nadiifiyeyaasha nadaafadda? Sanibrinder waa qalab guud ahaan buuq badan oo ay tahay in lagu xidho tuubada biyaha wasakhda ah. Maareeyaha WC waxa laga yaabaa inuu la kulmo cilad, taas oo laga yaabo inay abuurto wasakhayn buuqa haddi ay dhacdo in la rakibo aan haboonayn.
Comment réparer un sanibroyeur bouche ?
Halkee la dhigayaa waalka nadiifiyaha? Way ku filan tahay oo keliya in la dul dhigo tuubooyinka meesha dareeruhu ku wareego. Waalka aan soo laaban waxa laga yaabaa in uu ku haboon yahay mareenada WC, mashiinka dharka lagu dhaqdo, saxanka qubeyska, weelka dhaqda, saxanka, tuubooyinka cumulus, bulaacada nadiifiyaha, iwm.
PrevPreviousEst-ce que le bilan énergétique est obligatoire ?
NextC’est quoi la cuvette des WC ?Next